Road to Freedom: 2010
Posted by Nyein Chan Aung at 6:41:00 AM 1 comments
Posted by Nyein Chan Aung at 6:55:00 AM0comments
စိတ်ညစ်တယ် “နှင်း..” ရယ်
ချစ်သူ “နှင်း..” များပုန်းအောင်နေလေမလား
သေခါနီးလူနာကို Long Live သွားလုပ်နေရင်
Posted by Nyein Chan Aung at 9:26:00 PM0comments
"သူမဟာ မြန်မာပြည် ဖြစ်တယ်"
ကဗျာဆရာကတော့ အချစ်ကဗျာရေးတာပါပဲ။ စာဖတ်သူကတော့ ဒီကဗျာကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်လေးစားတဲ့ အမျိုးသမီးကို အစားထိုးထည့်ကြည့် မိတယ်။ ပြီးတော့ ခုလို ပြန်ရေးကြည့်မိတယ်။ မူရင်း ကဗျာရဲ့အနှစ်သာရ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ရင် ဆောရီးပါပဲ။
ပြည်တွင်းယက်ထည် ချည်လုံချည်သာ ၀င်ဆင်ပါသော ...
ပြည်သူများအရေး အလေးပေးကာ တနေ့ငါးနာရီ သတင်းနားထောင်သော ...
နက်မှောင်နွယ်ဖြာ ဆံကေသာမှာ မာလာပန်းခက် ဆင်မြန်းတတ်သော ...
တခါတွေ့က တသက်မမေ့စရာ မစွမ်းသာသော ...
မေတ္တာဓာတ်ပြည့် ကရုဏာငွေ့လွှမ်း တင့်တယ်ဆန်းသော ...
ကတ္တီပါနက်ပြာ မိုးဝဠာမှ ကြယ်တာရာထက် ပိုလင်းလက်သော ...
ဖိုးအနဂ္ဂ ထိုက်တန်လှစွာ ရတနာထက် ပိုမြင့်မြတ်သော ...
ရနံ့စုံစွာ ပန်းမာလာထက် လွန်စွာမွှေးကြိုင် သင်းပျံ့လှိုင်သော …
ဣတ္ထိများစွာ လူတကာထက် သာလွန်မြတ်သော ...
မကြိုက်ရင် ဖျက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာရေးတဲ့ စာပိုဒ် တပိုဒ်ချင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ကြိုးစားရေးကြည့်ထားတာပါ။ (စာပိုဒ် အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။)
Posted by Nyein Chan Aung at 8:47:00 PM2comments
တစ်ပတ်မှာသုံးခါ Gym ကိုလာတတ်သော
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၊ နှစ်သက်ကြည်နူးဖွယ်၊ တပ်မက်တွယ်ညိဖွယ်အလှဘုရင်မ
လရောင်ကို ထိုးထိုးဟောင်နေတဲ့ တောခွေးအတစ်ကောင်လား
တာဝတိသာက နတ်သမီးတစ်ပါးကို ငါမမြင်ဖူးဘူး
ချစ်စွာသော ထိုသူငယ်မလည်း ငြိမ်းချမ်းပါစေသား..
Posted by Nyein Chan Aung at 11:01:00 PM 1 comments
“ငါရွေးချယ်လိုက်တာ မင်းပါ ရွှေကံ့ကော်ဝါ”
ကဲ..မောင်ရင်။ မင်းဘယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြည့်ရှုချင်သလဲ? တဲ့
တိုင်းပြည် “ချောက်” ထဲကျတော့မယ်ဟုတ်လား
“၁၁ ကျပ်ကျတယ်အစ်ကို” တဲ့
လက်ဖက်ရည်က ၈ ကျပ်
အီကြာကွေးတစ်ချောင်း ၃ ကျပ်
ပေါင်း ၁၁ ကျပ် ကျသင့်တယ်။
လမ်းဘေးကဖိနပ်ချုပ်သမားလည်း ပညာရှင်ပဲ လို့
Posted by Nyein Chan Aung at 9:14:00 PM 1 comments
စူးစေသား ..... ။
Posted by Nyein Chan Aung at 11:40:00 AM4comments
အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၉ သန်းနဲ့ကန်တော်ကြီး ပဲလေစ့်ဟိုတယ်ကို ထူးကုမ္ပဏီက ၀ယ်လိုက်ပြီဟေ့၊ သြော်.. သာဓု သာဓု။ သာဓု ပါကိုတေဇ။ သူ့ခမျာချမ်းသာလိုက်ရှာတာ အရင်ဘ၀က ကုသိုလ်ကောင်းမူတွေ ပက်ပက်စက်စက် လုပ်ခဲ့တယ်ထင်ရဲ့။ ဒို့ပြည်သူမှာတော့ ကုသိုလ်မရှိ ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျား လူသေဖြေယူနေ တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်၊ ဗမာပြည်မှာသေရင်တောင် မလှမပအလောင်းကောင်ဘ၀ နံရိုးပြိုင်းပြိုင်းခါးကိုင်းကိုင်း မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ အဆီအသားတောင်ရှိရှာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောမယ် အမျှအမျှအမျှကိုတေဇ ရောက်ရာဘုံဘ၀က သာဓုခေါ်လိုက်ပါ.. ရောက်ရာဘုံဘ၀မှာ ဒီထက်လည်း များများကြီးပိုချမ်းသာ ကြီးပွားနိုင်ပါစေသား။ မုဒိတာပွားရမယ်တဲ့ ဒို့ဘုရားကမှာခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုနဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ဦးနုကို လက်ညှိုးထိုးတယ်၊ ဦးနုကနေ၀င်းကို ယိုးစွပ်တယ်၊ နေ၀င်းက သန်းရွှေသာတရားခံအစစ်လို့ပြောသွားမသွားကျွန်တော်မသိဘူး။ (၆၂ က သမဂ္ဂအဆောက်အအုံကို ဗုံးခွဲတာ အောင်ကြီးလုပ်တာ ငါမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ပြောသွားတယ်။)။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ပြောပရစေ ဖဆပလနဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီ.. ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဖဆပလ ဟတ်ဆစ်ဟတ်ဆစ်ပဲ (ထိုင်းလိုပြောတာ ငါးဆယ်ငါးဆယ်တဲ့)။ အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာ၊ ဒါဘုရားဟောခဲ့တာနော် လမ်းဘေးက အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေကချေကလေက၀ စကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ ဆောရီးပဲ၊ မကြိုက်ရင်လဲသေလိုက်။ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓကို ခင်ဗျားတို့ထက် ပိုယုံကြည်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခွေးဝဲစားကြားက ၀င်စားသွားတယ်။ နောက်တော့ ခွေးဝဲစားလက်မှ ခွေးသူခိုးလက်သို့ရောက်ခဲ့လေသတည်း။ ဗမာပြည်ကျွန်ဖြစ်နွံနစ်ခဲ့လေပြီ။ အနှစ် (၆၀) အလွမ်းဇာတ် စိန်အောင်မင်းနဲ့နွဲ့ရမှာလား.. ရွှေမန်းတင်မောင်နဲ့လွမ်းရမှာလား၊ ခင်ရေ.. လွမ်းလိုက်စမ်းပါခင်ရေ၊ အဲဒီအနှစ် (၆၀) အလွမ်းဇာတ်ကို ပိုးစိုးပက်စက်ပိုးလိုးပက်လက်ကြီးသာ လွမ်းလိုက်စမ်းပါခင်ရေ။ ခင်ရေ.. ခင်ရေ.. ခင်ရေ.. ခင်ရေ.. အမိန့်ချမယ်။ ဦးနုနဲ့ဦးကျော်ငြိမ်း သင်တို့ဗမာပြည်အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သော ခွင့်လွှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သော ပြစ်မူကြောင့် ဘ၀ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း သင်တို့အားမသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ်သတ်စေ((ပုံ ပြည်သူ့ခုံရုံး))။ ဗကပ-ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ အရှည်ကြာဆုံး ပါတီ၊ သခင်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အစဉ်အလာကြီးမြတ်သော အနှီပါတီအားခုချက်ခြင်း ဖျက်သိမ်းစေ၊ ဖုတ်သွင်းမြေမြှုပ်ပစ်စေ။ ((ပုံ ပြည်သူ့တရားရုံး))။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းဟာအကွဲအပြဲသွေးမုန်တိုင်းလိူင်းနဲ့ ရိုင်းချင်တိုင်းရိုင်း ကြမ်းချင်တိုင်းကြမ်း နွမ်းချင်တိုင်းနွမ်းနယ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမူဟာ ဥခွံထဲက မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ သန္ဓေသားအဖြစ် အကောင်မပေါက်ခင်ကတည်းက သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာ တွေကို စောင့်ထိမ်းကြ၊ ဆိုးယုတ်တဲ့ အစဉ်အလာတွေကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်သုတ်သင်ကြ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာရိုးရာ အစဉ်အလာကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ဟာလည်း အနာဂတ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းပါပဲ။ ကဲစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေ ပြောကြမယ်။ ညီလေး တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း.. ညီလေးကျော်ကျော်ဗို.. သစ္စာမေတ္တာရွှေမန်းသဘင်။ ဗမာ့ဇာတ်သဘင်အလံကို အမြင့်မားဆုံးလွှင့်ထူ လိုက်ကြ.. ညီလေးတို့။ နောက်မဆုတ်နဲ့ တစ်လက်မမှ နောက်ဆုတ်မပေးနဲ့၊ အသက်သေချင်သေသွားပစေ ခံစစ်စည်းရိုးကို လုံအောင်ကာကြ။ ကြေးကြိုးသရေလေလက်ခုပ် ရိုးရာအစဉ်အလာမြန်မာ့သဘင်ပညာ။ မင်းတို့အဘိုး ဘဘရွှေမန်း ဦးတင်မောင် ထားခဲ့တဲ့အမွေ၊ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်ကစ နှစ်ရာထောင်ချီသော ဗမာ့ရိုးရာအစဉ်အလာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ အလို ဟောဟိုမှာကြည့်လိုက်ကြစမ်း.. အလင်းလက်ဆုံးတောက်ပနေတဲ့အရာ အဲဒါ ပိုးသားချည်မျှဉ်လို လှပတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ မိုးသားတိမ်တိုက်လွှာတွေထက် သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ အပျိုစင်ကညာ နတ်ဒေ၀ီတစ်ပါးရဲ့ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်ပမာ ရင်သပ်လိူက်မော ဖွယ်ရာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ နှင်းဆီပွင့်လွှာဖတ်လေးလို သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ကြည်စင်ဝင်းပတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ မိုးသားကင်းစင် ကြည်လင်တောက်ပ လပြည့်ညထက် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ တိမ်လွှာကြားမှာ ငှက်အသွင် ပျံဝဲ ဘုံလွှာခုနစ်ဆင့်မှာ ဈာန်ရသလို မာန်ကြွနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ ရတနာကိုးသွယ် ပြည်တန်ပတ္တမြား ရတီများတဲ့ စိန်ပွင့်တကာထက် အဖိုးအနဂ္ဂ ထိုက်တန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အနုပညာ။ ဟုတ်တယ်။ ငါဒေ၀စ္ဆရာကို အသည်းပေါက်မတတ်ချစ်ခဲ့တယ်။
Posted by Nyein Chan Aung at 1:21:00 PM 1 comments
သူငယ်ချင်း.. ကာလီဖိုးနီးယားမှာ တစ်ဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ.. မြဒါလီတော့မရှိဘူးပေါ့ကွာ၊ သူ့အစား ကပ်ပလီမကြီးကိုလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် သွားလုပ်မပစ်လိုက်နဲ့ဦး။ အခန့်မသင့်ရင်မင်း ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်၊ အပြင်ထွက်ရင် အနွေးအင်္ကျီထူထူဝတ်၊ ငါလည်းမကြာခင် ပြန်လာခဲ့မယ်။ မင်းအတွက် လက်ဖက်ထုပ်နဲ့ ပုန်းရည်ကြီးဝယ်ခဲ့မယ်။ ဦးချိန်တီလျှက်ဆားနဲ့ အဘထရှူဆေးလည်း မဲဆောက်က ၀ယ်ခဲ့မယ်ကွာ။ ဒါနဲ့သူငယ်ချင်း.. ရှိရှိသမျှအုပ်စုတကာမှာ မင်းပို့နေတဲ့အီးမေးလ်တွေ ငါဖျက်ရတာလက်ညောင်းလှပြီ။ ပြီးတော့ ဒို့သမ္မတကြီး အိုဘားမားကိုလည်း သနားပါကွာ၊ ခုတလောသူ့ခမျာ မျက်နှာ မကောင်းရှာဘူး၊ တိုင်းပြည်လည်း စီးပွားရေးမကောင်းဘူး။ ဖုစတမ့်နဲ့ စားပြီး အားအားယားယား မင်းအသံ ပြဲကြီးနဲ့ဖြဲဖြဲမအော်နေပါနဲ့.. ခင်လို့ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်လလောက် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် ကလေးနေပေးပါလား ငါပြန်ရောက်ရင် ဂျက်ဒယ်နီရယ်အ၀တိုက်ပါ့မယ်။ ပလိစ်…။ တဆက်တည်းပြောရဦးမယ် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ ရတက်မအေး အထုပ်ပိုက်ပြန်ပြေးအောင် မင်းနွှဲခဲ့တဲ့ ရဲရဲတောက် လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ သမိုင်းအဆောင်ဆောင်မှာ နောင်လာနောက်သားတွေ မှတ်တမ်း တင်ရစ်လိမ့်မယ်။ တကယ်ဆိုရင် အနှစ်လေးဆယ်စီမံကိန်းနဲ့ မင်းဝယ်ထားတဲ့အိမ်၊ ခြောက်နှစ်စီမံကိန်းနဲ့ မင်းဝယ်ထားတဲ့ကား၊ ဒါ..မင်းရဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ သရုပ်သကန်ပဲသူငယ်ချင်း။ ငါ့မှာလည်း ဆန္ဒတချို့ရှိတယ်။ ရောင်းမယ်ဆိုရင် နယူးရော့မြို့ကြီးကို နှစ်တစ်ထောင် စီမံကိန်းနဲ့ ၀ယ်ထားချင်တယ်။ ဈေးညှိပေးပါလား၊ အဆင်ပြေရင် ပွဲခပေးပါ့မယ်။ ပြီးတော့ အော်ဒီစပေါ့ကား တစ်စီးလောက်လည်း လိုချင်တယ်။ ကလေးမရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ဘီယွန်းဆေးနဲ့ ဂျေဇက်တို့ ဇနီးမောင်နှံကိုလည်း အားပေးစကားပြောချင်တယ်။ အေးကွာ စိတ်မပျက်နဲ့အားမငယ်နဲ့။ ငါတို့ လက်ထက်မှာ ဒို့တော်လှန်ရေးကြီးမပြီးသေးရင် ငါတို့သားသမီးတွေဆက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ မင်းလက်ထက်မှာ မင်းအိမ်အကြွေး မကြေသေး ရင်လည်း မင်းသားသမီးတွေ ဆက်ဆပ်ကြလိမ့်မယ်။ သိန်းစိန်နယူးရော့လာတုံးက ကိုမိုးသီးဖိနပ်နဲ့ပေါက်တာ ငါဂုဏ်ယူတယ်။ (ကွန်ဂယက်ကျူလေးရှင်း ကိုမိုးသီး၊ စကားစပ်မိလို့ပြောတာ)၊ ငါတို့နိုင်ငံတော်သမိုင်းမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ် အင်္ဂလိပ်တွေ ဖိနပ်နဲ့တက်လို့ “ဖိနပ်ပြဿနာ” တောင်ဖြစ်ခဲ့သေးမဟုတ်လား။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ မင်းတို့ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကိုတော့ ငါမဝေဖန်ပါရစေနဲ့။ ငါ..ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး၊ နှာလည်းနဲနဲ စေးနေတယ်။ သြော်ဒါနဲ့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကြီးက အကျယ်ကြီးပဲသူငယ်ချင်း၊ ငါတို့တသက် ခတ်သောက်လို့မကုန်နိုင်ဘူး။ ကျန်တာတွေလူချင်းတွေ့မှပြောမယ်။ နူတ်တစ်ရာစာတစ်လုံးတဲ့။ အေးကွာ စာမဆုံးခင်တစ်ခုတော့ မှာခဲ့ချင်တယ် မင်းအရင် (အမေရိကားမှာသာ) ငါသေခဲ့ရင် ငါ့အသုဘဖိတ်စာမှာ နိုင်ငံရေးသမားလို့မထည့်နဲ့။ ကဗျာဆရာလို့သာထည့်ပေးပါသူငယ်ချင်း။ ပြီးတော့ငါ့အလောင်းမှာ အုတ်ဂူမတည်ပါနဲ့။ ကျောက်တိုင်မစိုက်ပါနဲ့။ အသုံးမကျတဲ့ငါ့အတွက် ကမ္ဘာမြေကြီး ပိုပြီးမလေးပင် စေချင်တော့ဘူး။ မင်းရဲ့အစဉ်ထာဝရ။
Posted by Nyein Chan Aung at 7:46:00 PM2comments
မြန်မာပြည်ရွေးဂေါက်ပွဲ၊ ၂၁ရာစုကမ္ဘာကြီးနှင့် အချစ်အကြောင်းများ
ဒီနေ့နေပူတယ်။ တနေ့ခင်းလုံးအိုက်စပ်ပူလောင်၊ ဆောင်းဦးပေါက်ကြီး ပန်ကာဖွင့်ဖို့တော့ မနိပ်သေးဘူးကွနော်။ အမှတ်တမဲ့ပါပဲ တနေ့က သီတင်းကျွတ်သွားတယ်။ ကလေးတွေက ဗြောက်အိုးဖောက်တမ်း ကစားပြီးလူကြီးတွေက လက်ပစ်ဗုံးဖောက်တမ်းကစားကြတယ်။ ဒီတစ်ပတ်သီတင်းခေါင်းစဉ်တွေကြည့်တော့ အလိုဘုရားဘုရား.. ဂီရိမုန်တိုင်းကြောင့်ကျောက်ဖြူတစ်မြို့လုံးပျက်စီးသွားပြီတဲ့၊ မူဆလင်တွေတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ အယ်ခိုင်းဒါး စပုတ်ပါစင်နိူးဆော်လိုက်သတဲ့၊ အမေရိကန်ကျူးကျော်မူကြောင့် အီရတ်အရပ်သား တစ်သိန်းကျော် သေဆုံးဆိုပဲ။ အမင်္ဂလာတွေချည်းသယ်ဆောင်လာတဲ့ကမ္ဘာမြေ မင်းနဲ့ငါသေခန်းပြတ် ချင်ပြတ်၊ ရှင်ခန်းပြတ်ချင်ပြတ် တစ်ခုခုတော့ ပြတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ မနက်ဖြန် ဘန်ကီမွန်း ဘန်ကောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုပဲ။ လူ့အခွင့်အရေးအလုပ်သမားရေးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သားလေးရှင်ပြုရေးသမီးလေးနားသရေး၊ (ဟာမဟုတ်သေးပါဘူး ဘွာတေးဘွာတေး) ဂေးလက်စဘီယမ်အရေး ဘာအရေး ညာအရေးဟိုအရေးဒီအရေး အဲဒီအရေးလူပ်ရှားသူတွေ စာရွက်တွေကိုင်ပြီး အဲဒီဘဲကြီးကို တိုင်ဖို့တောဖို့စောင့်နေကြတယ်။ သြော် သာဓု.. သာဓု.. သာဓု.. “သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ”။ ဒီနှစ် စပါးရွှေဝါ၀င်းပါစေ ပန်းတွေသင်း ပါစေ။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ဒီလိုဗျာ ကျနော်တို့အိမ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ပုလိပ်ဂိတ်အသစ် တစ်ခုလာ ဆောက်နေတယ်။ လက်မှတ်မရှိတဲ့ ဗမာအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဖို့တဲ့၊ အဲဒီအဆောက်အအုံကို ဗမာနေ့စားအလုပ်သမားတွေနဲ့ ဆောက်နေကြတယ်။ တောက် ခွေးမသား တွေလူပါးဝတယ်။ မကြာခင် ကျက်သရေမရှိတဲ့မျက်ခွက် ကျက်သရေမရှိတဲ့အသံတွေ မြင်ရ ကြားရ တော့မယ်။ ဒီနှစ်ပွဲရာသီအစမှာ ဖာဂူဆန် တွက်ကိန်းတွေလွဲနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျွန်တော်က အသင်းစွဲတွေအရောင်စွဲတွေသိပ်မကြီး တတ်ပါဘူး။ လာမယ့်ခုနစ်ရက်နေ့မှာ ရွေးဂေါက်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မယ်တဲ့။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ကျွတ်မှဖြစ်မယ်။ ဟော ခုတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေတစ်ယောက် တိုးလို့တွဲလောင်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကျွတ်သွားရှာပြီ။ တကယ်ပြောတာ လူရွှင်တော် ကိုငြိမ်းချမ်း ပြောသလို စေ့စေ့ကြည့်တော့ ဒီလူကြီး ရုပ်မဆိုးဘူး၊ တနေ့လုံးထိုင်ကြည့်မှမြင်ရတဲ့အလှမျိုးဆိုလား၊ ညိုချောကြီးဗျနော်။ ငယ်ငယ်က စစ်ထဲမ၀င်ပဲ ဓါတ်ရှင်မင်းသားလုပ်ခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ဒီလောက် ဒုက္ခများမှာ မဟုတ်ဘူး။ ညီလေးတစ်ယောက်ကမေးတယ် “အစ်ကို အလံဆိုတာဘယ်သူလုပ်တာလဲ၊ ဘယ်မှာလုပ်တာလဲ”တဲ့.. အလံဆိုတာ လူတွေလုပ်တာ၊ စက်ရုံမှာလုပ်တာပေါ့ညီလေးရာ… လေးလေး နက်နက်မထားပါနဲ့.. ဒီတစ်ခုမကြိုက်ရင် နောက်တစ်ခုလဲလို့ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ စကားပြော ကောင်းရင် လေယာဉ်တောင်အလကားစီးလို့ရတယ်ဆိုပဲ။ ဒီမှာမိတ်ဆွေ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြောတဲ့ စကားတွေ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေမယုံတော့ဘူးဗျ။ သြော် ဒုက္ခ..ဒုက္ခ သိခြင်းသည်လည်းဒုက္ခ၊ မသိခြင်းသည်လည်းဒုက္ခပါတကား။ ဟောလာပြီ.. စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းတဲ့နေရာမှာ ဆေးရိုးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့်.. ဘာတဲ့ “မေတ္တာတစ်ဆင်စာပေးရင် ယူမလားမိန်းကလေး” တဲ့.. တောပြန်လိုက်တော့ ကိုသိန်းတန် ရှင့်မေတ္တာက ကျမဒေါက်ဖိနပ်တစ်ရန်စာရှိလို့လား။ ဟားဟားဟား။ “ဒါနဲ့ နေပါဦး အချစ်ဆိုတာဘာလဲဗျ” ကျနော်တော့ မသိဘူး၊ ဟိုကောင်မလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို သွားမေးကြည့်လိုက်တော့ဗျာ။ တော်ပြီ.. တော်ပြီ စိတ်ညစ်ရတဲ့အထဲ အဲဒီရွေး ဂေါက်ပွဲ ဆိုတာကြီး ကလည်း တစ်ဒုက္ခ။ ခွေးမသား ထိုင်းပုလိပ်တွေကလည်းတစ်ဒုက္ခ။ ခေတ်မကောင်းတဲ့အခါ ဗမာဖြစ်ရ တာလည်း တစ်ဒုက္ခ။ ဒီနေ့မဲဆောက်မှာနေပူတယ်။ မနက်ဖြန်မိုးရွာချင်ရွာမယ်။ လူတွေကလည်း ဖောက်ပြန်တယ်။ သဘာဝတရားကလည်းဖောက်ပြန်တယ်။ “သဗ္ဗေသတ္တာ၊ ကမ္မသကာ” ပါတကား။ “အလုံးစုံသော သတ္တာဝါတို့အား ကံစီမံရာအတိုင်းသာလျှင် ဖြစ်ရအံ့” တဲ့။ အဲဒါ ကျုပ်ပြောတာ မဟုတ် ဘူး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောသွားတာ ခင်ဗျားတို့ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေကြ။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:18:00 PM 1 comments
Posted by Nyein Chan Aung at 9:43:00 PM0comments
နေ့လည် ၁၂ နာရီထိုးနေပြီ
ဘ၀င်မြင့်ချင်မြင့်နေမယ်။ ကျနော့်ကို ကျိန်ဆဲချင်ဆဲနေမယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 8:19:00 PM 1 comments
Posted by Nyein Chan Aung at 12:22:00 PM 1 comments
******အရွယ်နဲ့မမျှ ဘ၀ကိုကြံ့ကြံ့ခံ အမိအဖကို ခေါင်းရွက်ဈေးရောင်းလုပ်ကျွေးနေသူ။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မူအပြည့်ရှိတဲ့ မျက်နှာချိုအေး ဆက်ဆံရေးကောင်းသော မဲဆောက်ဈေးမှ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး “မ......” အတွက်ရည်ရွယ်ရေးဖွဲ့ပါတယ်။
Posted by Nyein Chan Aung at 12:33:00 PM 1 comments
ချစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် ယုံမှာလား မစကားဝါ
ကဆုန်လမှာ စကား၊ စကားဝါ၊ ချဲယား
၀ါခေါင်မှာ ခတ္တာနဲ့ မိုးဆွေ
မစကားဝါကိုယ်ငွေ့နဲ့နွေးတဲ့ ‘Joy’ ဂျင်းဂျက်ကက်လေးချစ်တယ်
ကျနော့်အတွက် မစကားဝါဟာ အရေးအကြီးဆုံးမဖြစ်သင့်ပါဘူး
စစ်အေးခေတ်လွန် ၂၁ရာစုကမ္ဘာကြီး ပိုပြီးပူနွေးလာတယ်
သစ်တောတွေပြုန်းတီး၊ ရေတွေကြီး၊ မီးတွေလောင်
ပြဿနာတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ တည်ရှိနေမယ်
ဗုဒ္ဓဒေသနာတရားတွေက ကျနော်တို့ကို သင်ကြားခဲ့တယ်
အချိန်အားရတဲ့အခါ ပရဟိတ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ပါ
ကျနော်လည်း အဝေးမြို့တစ်နေရာမှာ ခရီးဆက်ဆဲပါပဲ
ရှင်သန်ခွင့်အတွက် မိုးရေစက်တွေကို ကျေးဇူးတင်နေကြလိမ့်မယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 8:30:00 PM2comments
06, 11, 2010 – 7:11 PM
Posted by Nyein Chan Aung at 8:48:00 PM3comments
၁၇၇၆ မှာ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရတယ်
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အောင်ပွဲအတွက် အနှစ် ၂၀၀ ကျော်
အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ဘယ်သူတွေ ဆံပင်ဘယ်လောက် ရှည်ခဲ့ကြပြီလဲ ?
ကစားသမားညစ်ရင် အ၀ါကဒ်အနီကဒ်ပြပြီး ကွင်းပြင်ထုတ်မယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 11:33:00 AM3comments
Posted by Nyein Chan Aung at 2:21:00 PM 1 comments
အချစ်ရေ ဗုံးတွေခွဲ ဗုံးတွေကွဲ
အချစ်ရေ ဗုံးတွေကွဲ ဗုံးတွေခွဲ
X2O ရေကစား မဏ္ဍပ်မှာ
မြစ်ဆုံမှာလည်း ဗုံးတွေကွဲ ဗုံးတွေခွဲ
ဒီဗုံးကို ငါခွဲတယ် မပြောလိုက်ပါနဲ့ အချစ်ရယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 11:47:00 PM 1 comments
ဇင်းမယ်မှာ ညီမလေးပန်ဖို့ ပိတောက်တွေ ၀ါဝါထိန်တောက်လို့နေခဲ့တယ်
Posted by Nyein Chan Aung at 5:50:00 PM 1 comments
၂၀၁၀ ကိုဖြတ်၍ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် ..
ဦးရွှေအုန်းရေ အသက်တွေလည်းကြီးပြီစိတ်လျှော့လိုက်ပါ.. ဘဘရေ
ဦးသုဝေ နောက်တစ်ခါလာပြန်ပြီလား စိန်လားမြလား ဟေလာမောင်တို့ဝါး
ကမ္ဘာကြီးက စုတ်သတ်ပြီး ယဉ်ကျေးဟန်ဆောင်တယ်
ပြည်သူသန်းငါးဆယ်က ပြည်တွင်းမှာ စစ်ကျွန်ခံ
ကျန် ဆယ်သန်းက တိုင်းတပါးမှာ ဖောရိန်းကျွန်ခံ
NLD လည်း ရှေ့ဆက်ဖို့ခက်
ဒီကဗျာကို ကျနော်ရေးခဲ့တယ်။ ။
Posted by Nyein Chan Aung at 12:40:00 AM 1 comments
Posted by Nyein Chan Aung at 10:08:00 PM2comments
မထူးတဲ့ ၂၀၁၀။ ။
Posted by Nyein Chan Aung at 10:51:00 PM0comments
မြန်မာပြည်ရွေးဂေါက်ပွဲ၊ ၂၁ရာစုကမ္ဘာကြီးနှင့် အချစ်အ...
ဇင်းမယ်မှာ ညီမလေးပန်ဖို့ ပိတောက်တွေ ၀ါဝါထိန်တောက်လ...